Haweenay ‘been cad’ u sheegtay Trump oo iska casishay Aqalka Cad – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Waxay noqonaysaa qofkii afaraad oo muddo sanad ah gudihiis iska casilay xilka agaasimaha warbaahinta Aqalka Cad.
Hope Hicks oo ahayd agaasimaha warbaahinta Aqalka Cad ayaa xilkaasi iska casishay, 24 saac uu kadib markii ay guddiga baaraya fadeexada Ruushka u sheegtay in ay been cad u sheegtay madaxweyne Donald Trump.
Gabadhani oo muddo dheer la shaqaynaysay madaxweynaha ayaa noqonaya qofkii afaraad oo muddo sanad gudihiis ah ka tagta shaqada agaasimaha warbaahinta Aqalka Cad oo ah xil sidii ‘dhimbil gogol u kulul’.
Waa 29 jir horay usoo ahayd dumarka dharka xayaysiiya, ka hor intii aysan Aqalka Cad kusoo biirina waxa ay kasoo shaqaysay shirkadda Trump.
Trump oo ka hadlay is casilaadeeda ayaa sheegay in ay ahayd gabadh aad hawlkar u ah, islamarkaasna uu tabi doono.
Ma aysan sheegin sababta ay xilka uga tagtay, balse Trump ayaa sheegay in uu aqbalay markii ay u tagtay, una sheegtay in ay raadsanayso fursado cusub.
Hope waxa ay ku guuleysatay in ay noqoto qof qunyar socod ah, islamarkaasna ka gabata saxaafadda, mana jirin wax fadeexado ah oo soo foodsaaray si ka duwan dadkii xilka kaga horeeyay.
Shalay guddiga Aqalka Congress-ka ee baaraya fadeexada farogalinta Ruushka ee doorashadii Maraykanka ka dhacday sanadkii 2016-kii ayaa maraanmarayay muddo 9 saacadood ah, waxayna inkirtay in ay been ka sheegtay ama qarisay wax la xiriira arrimahan oo la tuhunsanyahay in ay tahay marqaati muhiim ah.
Balse waxa ay qiratay in ay been cad u sheegtay Trump dartiis si ay u difaacdo.
← Ardayda oo lagu abaalmarinayo in ay taleefoonada dhinac iska dhigaan
Afrika “kama guulaysan karto macluusha” →